Raad-raaca guur-ka (Qeybta 3aad) – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Qeebta labaad: Qaangaarimada ku dhisan xeerka civil/shibilka
Farqiga weyn ee u-dhaxeye arragtida qaangaarka ee ku saleysan shareecada islaanka iyo tan ku saleysan xeerka shibilka waxuu yahay:
1- in arragtida shareecada islaanka qadarin iyo ictiraaf siiso biseelka la xariira jirka ( physical ama, biological maturityالنضوج الجسدي )
Taas micanheeda waxuu yahay in shariicada islaanka canuga jir ahaan u bislaade, ama canugta jir ahaan u’bislaate uaragto inuu yahay/ tahay qof qaangaare xitaa hadii da’diisa/da’deda tahay 12, 13-dabshid ama wax la mid ah, iyo weliba inuu xaq buuxa uleyahay inuu guursado, xill waalidnimana qaado asago/ayadoo 12 ama 13 jir ama da’ inta ka yar jira/jirta
Dhanka kale arragtida ku saleysan xeerka shibilka qaangaarnimada waxaay ku xirta hal sharid oo ah in canuga buuxiyo 18 dabshid.
Taas micnaheeda waxuu yahay in arragtida ku dhisan xeerka shibilka ogoleen in canug jer ahaan u’bislaade asago weli buuxinin 18 sano loo arko inuu yahay qaangaar.
Xujooyinka xeerka shibilka ku diide in canug aanan 18 dabshid buuxinin loo arko inuu qaangaar yahay waxaa kamid-ah:
(a) In canauga jir ahaan dhaqso u bislaade, koriimadiisa weli mareyso marxalad bilow ah, taaso micnaheeda yahay in koriimadiisa jir-ahaan weli waxbadan u dhimantahay.
(b) In canuga jirr-ahaan dhaqso u bislaade weli nafsad ahaan caruur u yahay.
(c) In canuga jirr-ahaan dhaso u bislaade weli caqli ahaan si fiican u bislaanin.
(d) In canuga jir-ahaan dhaqso u bislaade weli bulsho ahaan u bislaanin (Social maturity, and emotional estability, النضج الاجتماعي والثبات العاطفي)
Sida aawigeedna xeerka shibika ma ogola in waalikda, bulshada iyo dowlada canug aan 18 dabshid buuxinin ku wareejyaan xuuqda muwaadinka qaan-gaarka ah.
Dhanka kale, xeerka shibilka, cung kasta uu buuxiya 18 dabshid, hase-ahaate caqli-ahaan udanbeya, ama jir-ahaan weli bislaanin waxuu u arka qof qaan-gaar ah, iyo waliba muwadin ama citizen xuqooqdiisa dhameestirantahay .
Dhanka kale, xuquuqda geberta ka hanto qaangaarnimada dastuur ahaan waxaay 100% la samintahay xuquuqda wiilka ka hanto qaangaarnimada.
Sido kale xeerka shibilka wiilka iyo geberta qaangaare waxuu u arka in dastuur ahaan yihiin laba mowaadin (citizen) leh xuquuq siman, mana jirto xuquuq dheeraad ah oo lagu hanankaro dhadignimo ama labnimo toona.
Intaa waxaa ku dhamaade, isgaragdhigida aragtida qaangaarnimada ee ku saleysan shariicada islaanka iyo tan ku saleysan xeerka shibilka.
La soco qeybaha kale ee qormada.